भोल्यूम प्रबन्धक- # १ म्याक अनुप्रयोग माउन्ट एप्पल र विन खण्डहरू / सेयरहरू बेर आश्चर्यजनक
भोल्यूम प्रबन्धक - # १ म्याक अनुप्रयोग माउन्ट एप्पल र विन खण्डहरू / सेयरहरू
आवाश्यक हुन्छ: म्याक 10.11-12.0+
भोल्यूम प्रबन्धक - # १ म्याक अनुप्रयोग स्वत: माउन्ट एप्पल र विन्डोज खण्डहरू, सेयरहरू, ड्राइभहरू
भोल्युम प्रबन्धक एक Mac OS एप हो जुन संगठित गर्न, स्वचालित र Apple भोल्युमहरू/सेयरहरू/डिस्कहरूको माउन्टिङ निगरानी गर्न प्रयोग गरिन्छ। विन्डोज र एप्पल म्याकहरूमा माउन्टिङ व्यवस्थापन गर्न विश्वव्यापी म्याक एप (एप्पल सिलिकन वा इंटेल) प्रयोग गर्न सजिलो। ल्यापटपहरूले भोल्युम प्रबन्धकलाई म्यानुअल रूपमा वा स्वचालित रूपमा काम र घरमा भोल्युमहरू माउन्ट गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। माउन्टिङको वैकल्पिक समयतालिकाले सेयरको माउन्ट र रिमाउन्ट पनि निगरानी गर्दछ। भोल्युम प्रबन्धकलाई इथरनेट ल्यानमा सुतिरहेका कम्प्युटरहरूलाई जगाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। म्याक एपले सजिलैसँग साझेदारीहरू माउन्ट गर्दछ। माउन्ट एप्पल ड्राइभ सजिलै संग। Mac मा Windows साझाहरू माउन्ट गर्नुहोस्।
म्याक एप माउन्ट विन SMB
भोल्यूम प्रबन्धक म्याक सार्वभौमिक अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सजिलो छ जुन एप्पल सिलिकॉन वा इन्टेल सीपीयूमा चल्दछ जुन स्वचालित रूपमा ड्राइभ, खण्डहरू वा निर्देशिकाहरू माउन्ट गर्दछ।
भोल्यूम प्रबन्धक - # १ म्याक अनुप्रयोग माउन्ट एप्पल र विन खण्डहरू / शेयर मात्रा
भोल्युम प्रबन्धक- #१ म्याक अनुप्रयोग स्वतः माउन्ट भोल्युम गर्न को लागी
बेर अद्भुत बाट डाउनलोड (माथि)
वा म्याक एप स्टोर (तल)
भोल्युम प्रबन्धक एक म्याक OSX अनुप्रयोग संगठित, स्वचालित र विन्डोज (SMB) र एप्पल भोल्युम/शेयर/डिस्क को माउन्ट मा निगरानी गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। सजीलै विन्डोज (SMB) र एप्पल शेयरहरु को माउन्टिंग को लागी म्याक अनुप्रयोग को उपयोग गर्न को लागी। ल्यापटप भोल्युम प्रबन्धक को उपयोग गर्न को लागी म्यानुअल वा स्वचालित रूप मा काम र घर मा भोल्युम माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। माउन्टिंग को वैकल्पिक अनुसूची माउन्ट र शेयर को remount निगरानी। भोल्युम प्रबन्धक पनि एक ईथरनेट ल्यान मा सुतिरहेको कम्प्यूटर जगाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईंलाई तपाईंको नेटवर्कमा कहिँबाट डिस्कहरू माउन्ट गर्न आवश्यक छ भने भोल्यूम प्रबन्धकले तपाईंको जीवन सजिलो बनाउन सक्छ। भोल्यूम म्यानेजरले भनेको अनुसार मात्र गर्छ, यसले भोल्युमहरूको सूची राख्दछ (अन्य कम्प्युटरहरूमा हार्ड ड्राइभहरू) आवश्यक प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डको साथ र तिनीहरूलाई स्वत: माउन्ट गर्दछ जब तपाईं चाहानुहुन्छ। अझ राम्रो यो हेर्छ र निश्चित गर्दछ कि तिनीहरू माउन्ट रहन्छन् यदि नेटवर्क स्थिति परिवर्तन भयो भने।
भोल्यूम प्रबन्धकले माउन्टमा नजर राख्न सक्छ र यदि सर्भर तल झर्छ (र माउन्ट गायब हुन्छ) भोल्युम म्यानेजरले सेयर पुन: माउंट गर्नेछ जब सर्वर अनलाइन फिर्ता आउँदछ। जे होस्, यो हुनको लागि, तपाईंले "यो माउन्ट मोनिटर गर्नुहोस् र यसलाई राख्नुहोस्" स्विच जाँच गर्नु पर्छ।
माउन्ट को वैकल्पिक अनुसूची माउन्ट र शेयर/भोल्युम/ड्राइव को remount निगरानी।
भोल्युम प्रबन्धकले विन्डोज सेयरहरू चढाउन सक्दछ जब प्रयोगकर्तानाम सेयरिंगमा सर्भरमा स्थानीय हुन्छ तर भोल्युम प्रबन्धकले यस समयमा DOMAIN सर्भर प्रमाणीकरण समर्थन गर्दैन। हामी हाल सक्रिय निर्देशिका र डोमेन सर्भर प्रमाणीकरण मा काम गर्दै छौं। फेरि, यसले नियमित गैर- DOMAIN विन्डोज आरोहणलाई असर गर्दैन।
म्याक ओएस एक्स टेक्नोलोजीहरू
भोल्युम प्रबन्धकले बन्जौरलाई स्थानीय भोल्युम माउन्ट गर्न सजिलोको लागि प्रयोग गर्दछ।
भोल्यूम प्रबन्धक सबै भोल्युमहरूको लागि एक ग्लोबल प्रयोगकर्ता र पासवर्ड प्रयोग गर्न सेटअप गर्न सकिन्छ।
भोल्यूम प्रबन्धकले ल्यानमा कम्प्युटरहरू जगाउन सक्छ।
भोल्यूम प्रबन्धकले कुनै पनि मिति र समयमा ड्राइवहरूको चढ्ने तालिका बनाउन सक्छ।
भोल्यूम प्रबन्धक ब्ल्याकआउट्स पछि ड्राइभहरू / सेयरहरू / भोल्युमहरू / पोइन्टहरूलाई रिमाउन्ट गर्न सक्छ।
भोल्यूम मैनेजर म्याकअपडेटबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
का लागि स्थानीयकृत
कोरियाली, स्पेनिश, फ्रेन्च, जर्मन, जापानी, चिनियाँ, उर्दू, अरबी
समर्थनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
भोल्यूम प्रबन्धक जाँच गरिसके पछि कृपया बम आश्चर्यजनकमा अनुप्रयोग खरीद गर्नुहोस् स्टोर सबै सुविधाहरू अनलक गर्न र यसलाई निरन्तर विकासको समर्थन गर्न। खरीद पछि तपाईं स्वचालित रूपमा लाइसेन्स कुञ्जीसँग दर्ता ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। वा खरीद गर्नुहोस् एप्पल म्याक आईट्यून्स स्टोर।
हामी तपाइँबाट सुन्न चाहन्छौं। कृपया हामीलाई तपाईंको विचारहरू, सुझावहरू र बगहरू ठीक गर्न पठाउनुहोस्। भोल्यूम प्रबन्धक समर्थनका लागि धन्यवाद।
बेर आश्चर्यजनक मा चालक दल
- प्रयोगकर्ता माइकल बिट्टनरद्वारा रिपोर्ट गरिएको बग फिक्स गरियो: 'माउन्ट पोइन्ट पहिले नै प्रयोग भइरहेको छ'।
- म्याक ओएस ११ पछि प्रयोग गर्नेहरूका लागि एएफपी अनुपलब्ध भयो। एप्पलले अब एएफपीलाई समर्थन गर्दैन।
- शेयरवेयर plumamazing.com संस्करणमा प्रयोग गरिएको स्पार्कलमा edsa को लागि समर्थन थपियो
- loginservicekit थपियो
- केहि जर्मन शब्दहरू शुद्धताको लागि परिवर्तन भयो
- फिक्स्ड सानो बग: जब "२ स्तर" माउन्ट पोइन्ट (उदाहरण: भिडियो / चलचित्रहरू) को साथ एसएमबी सेयर गर्ने माउन्टले राम्रोसँग काम गर्दछ, तर अनुप्रयोगले रिपोर्ट गर्दछ कि माउन्टले काम गर्दैन। लगले सफलताको रिपोर्ट गर्दछ, र म्याकोसले माउन्ट गरेको साझेदारी देख्दछ, तर स्थिति स्क्रिन "माउन्ट गरिएको छैन" देखाउँदै।
- अंग्रेजी को अतिरिक्त स्थानीयकृत:
- एप्पल सिलिकॉन र इंटेल म्याकहरूको लागि विश्वव्यापी बाइनरीको रूपमा संकलित
- स्पार्कल फ्रेमवर्क अपडेट गरियो।
- अवैध माउन्ट मार्गको मामलामा त्रुटि देखाउनुहोस्।
- मुद्दा फिक्स गरियो: मूल्यांकन अवधिमा अनुप्रयोग रसिदहरूको जाँच गरेन।
- VolumeManager लक्ष्यका लागि कम्पाइल समय त्रुटि फिक्स गरियो।
- शेयरअड्ड्रेस_ यूआरएल शून्य हुँदा क्र्यास फिक्स भयो।
उत्तम प्रतिक्रियाको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद
- अद्यावधिक लगइनसर्वाईसिट फ्रेमवर्क।
- नयाँ लक्ष्य
- सक्षम स्यान्डबक्स
- निश्चित चरणबद्धता मुद्दा
- अब नयाँ एप्पल notarization सुरक्षा को उपयोग गर्दछ
- मेमोरी उपयोगको लागि अनुकूलित
- xcode १०..10.3 सँग कम्पाइल गरिएको, स्विफ्ट5प्रयोग गर्दछ
- परीक्षण समाप्त भएपछि, अन्तिम असक्षम भोल्युम पहिलो खण्डको सट्टा माउन्ट भयो। स्थिर
शेयर / भोल्युम नामको पछिल्लो शेयर नाममा परिवर्तन भइरहेको मध्यस्थ मुद्दा जब प्रयोगकर्ता भोल्युम पाठ क्षेत्रमा लेख्दछ।
- सुरुआतमा लगइन थपियो
प्रेफ्सको सेटिंग्स प्यानलमा यूआई परिवर्तन हुन्छ
केहि अनुप्रयोग राम्रो बनाउन सक्छ? हामीलाई थाहा दिनु। धन्यबाद।
- सुधारिएको मोनिटर र रिमाउन्ट
- परिवर्तन गरिएको इजाजतपत्र खरीद सन्देश सफलता
- स्थिर मुद्दा जहाँ भोल्युम अनमाउन्ट गर्न असमर्थ यदि स्थानीय र साझा भोल्युम नाम समान छ।
- सानो ui र हिज्जे सुधारहरू।
डन र केन प्रयोगकर्ताहरूलाई ठूलो धन्यवाद। कृपया सुझावहरू राख्नुहोस्!
- थपिएको स्वत: पुन: गणना
- लक गर्ने / अनलक म्याकेनिस द्वारा प्रतिक्रिया नगर्ने त्रुटि फिक्स गरियो
- सेटि inहरूमा 'अपडेटको लागि जाँच गर्नुहोस्' बटन थपियो।
- क्र्यास फिक्स्ड क्र्यास भयो जब सेयर एड्रेस_ यूआरएल शून्य छ।
- स्थिर async कल
- दर्ता नगरिएको अनुप्रयोगले अब भोल्युम राम्रोसँग खारेज गर्दछ
- अधिक ui परिवर्तनहरू
- लाइसेन्स परिवर्तनहरू
- इजाजतपत्र परिवर्तन
- सुधारिएको इजाजतपत्र
- प्रतिलिपि बनाउँनुहोस् र लाइसेन्स क्षेत्रमा काम गर्दछ
हामी सबै प्रतिक्रियाको कदर गर्दछौं। यदि तपाईंले बग भेट्टाउनुभयो भने हामीलाई थाहा दिनुहोस्। यदि पुस्तिकालाई थप जानकारीको आवश्यक छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। तपाईंको सुझावहरूले अनुप्रयोगलाई पनि मद्दत गर्न सक्दछ। धन्यवाद
- म्याकको लागि लोकप्रिय माउन्टवाचर अनुप्रयोगमा पहिलो संस्करण अपडेट
भोल्यूम प्रबन्धक म्यानुअल
MacUpdate.com बाट समीक्षा
1.9.1 AFP समर्थनको साथ अन्तिम हो